विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको संक्रमणवाट बच्न र बचाउन सरकारले गरिरहेको लकडाउनको बर्तमान विषम परिस्थितिमा ताजा अर्गानिक तरकारी अनवरत उपलव्ध गराउने कार्य भैरहेको छ।
यस कार्यमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नंबर ८ स्थित गोठाटारमा सामाजिक अभियन्ता जयकला बस्नेतको अगुवाईमा भैरहेको हो। जयकला बस्नेत अध्यक्ष रहेको मनमुरी कृषि सहकारी संस्था मार्फत मनमुरी कृषि बजार नै गोठाटारमा संचालन गरिएको छ। जहाँवाट मनमुरी कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकहरुव्दारा उत्पादन गरेका ताजा तरकारी तथा फलफूललाई उपलव्ध हुने गरेको जानकारी जयकला बस्नेतले लण्डन काठमाडौंलाइ बताएकी छिन्।
पूर्वाधार तयार भएको गेटालाई बेवास्ता, डडेल्धुरामा नयाँ मेडिकल कलेज
माओवादीका शर्मा र बस्नेतले आफ्नै पालिका जोगाउन सकेनन्, एमालेका यामलालले सुधारे
निर्वाचित त भइयो, अब के गर्ने !
काठमाडौं नगर कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत ? बालेनलाई कति गाह्रो ?
कामना सम्मिलित टोलीको विजयी सुरुवात
एमाले महासचिव भन्छन्- अदालतको सक्रियता बुझिनसक्नुको भयो
मेयर बालेनको प्रतिबद्धता – मेरो क्षमता काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउन लगाउनेछु